Ny onja ecommerce tsy azo sakanana | Martech Zone
Zoma, Desambra 2, 2011 Alakamisy, Desambra 1, 2011 Douglas Karr
Raha mbola tsy nahasarika ny sainao ny statistikan'ny Cyber ​​Monday dia tokony hisy izany. Ny fandaniam-bola amin'ny Alatsinain'ny Cyber ​​dia nahatratra $ 1.25 Miliara ho laharana ho andro fandaniana amin'ny Internet an-tsokosoko indrindra amin'ny tantara araka ny comscore. Nifanakalo hevitra foana izahay ecommerce amin'ny anay bilaogy marketing toy ny paikady mifandraika kokoa amin'ny paikady an-tserasera ankapobeny. Na izany aza, miaraka amin'ny vokatra toa Schedulicity ary Milo mamely ny tsena, mazava tsara fa saika ny orinasa rehetra dia hanana karazana singa ecommerce raha manantena ny hanararaotra ny onja ecommerce tsy azo sakanana.
Infographic avy amin'ny Yottaa Site Speed ​​Optimizer.